अचम्मको संसार – कैदीलाई दिनभर घुम्न दिइने जेल | Aanbookhairenipost
अचम्मको संसार – कैदीलाई दिनभर घुम्न दिइने जेल
कैदीहरुले जेल तोडेर भागेको घटनाले बेलाबेलामा राम्रै समाचार बनाउने गरेको छ । यसै कारण अपराधीमाथि कडा निगरानी राख्न हरेक जेलमा विशेष सुरक्षा अपनाइएको हुन्छ । हुन त जेलै नभएको देश संसारमा नभएको पनि कहा हो र ! तर हाम्रै छिमेकी मुलुक भारतको विहार राज्यमा कैदीलाई दिनभर खुला छोडिने जेल पनि छ भन्ने कुरा चाहि धेरै थोरैलाई मात्र थाहा होला ।
‘ओपन एअर करेक्सनल होम’ नाम दिइएको यो जेल कलकत्ताबाट २ सय ६० किलोमिटर टाढा मुर्शिदाबाद जिल्लास्थित लालगोलामा रहेको छ । सन १९८७ मा स्थापित जेल ठूलो क्षेत्रमा फैलिएको छ भने यहाँ १ हजारभन्दा बढी रुखहरु र ठूलो स्विमिङ पुलसमेत रहेको छ । लालगोलाको एक शाही परिवारले उक्त जग्गा सरकारलाई उपहारको रुपमा दिएको थियो ।
दिमागै हैरान हुने कुरा के छ भने उक्त जेलमा कैदीहरुलाई दिनभर मन लागेको ठाउामा घुमफिर गर्न स्वतन्त्रता दिइएको छ । कैदीहरु पनि कति ज्ञानी ! बिहान सबेरै निस्किएपछि उनीहरु साँझ तोकिएको समयमै ६ बजेभित्र जेल प्रवेस गर्दछन् । कैदीलाई दिनभर बाहिर घुम्न सुविधा दिइएकोले यो जेल आजभोलि ‘मुक्त कारागार’ को नामले चर्चित छ । हाल यहाँ १ सय ३ कैदी रहेको राज्य एडीजी बीडी शर्माले बताए । सबै कैदीहरु दिउसो काम गरी रातमा जेल र्फकने गरेको शर्माले थपे । यदि तपाई यस जेलको कैदी भएको भए के गर्नु हुन्थ्यो ? भाग्नु हुन्थ्यो या दिनभर काम गरी र्फकनु हुन्थ्यो ?
This entry was posted on June 12, 2011 by aanbookhairenipost in स्थानीय समाचार/local news.